पशुपालनबाट यस्तो कमाल गर्दैछन् गिरीराजले ! | suryakhabar.com
Home कृषि पशुपालनबाट यस्तो कमाल गर्दैछन् गिरीराजले !
पशुपालनबाट यस्तो कमाल गर्दैछन् गिरीराजले !
on: ३० आश्विन २०७५, मंगलवार १५:१३ In: कृषि, समाचारTags: No Comments
बुटवल । कोरियाको गाई, बाख्रा, कुकुरको फार्ममा लामो अनुभव हासिल गरेका रुपन्देही सैनामैना– ४ का गिरीराज भट्टराईले पशुपालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
कोरियाबाट फर्केर फर्निचर व्यवसायमा हात हालेका उनले सो व्यवसायमा सफलता नपाएपछि पशुपालन व्यवसाय शुरु गरेका हुन् । भट्टराईको पशुपालन फार्मबाट दैनिक ७५ लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसबाट मासिक रु एक लाख ५७ हजार आम्दानी हुने उनले बताए । फार्ममा ११ भैँसी र तीन उन्नत जातका गाईबाट उत्पादन हुने गरेको दूध स्थानीय बजारमा नै खपत हुने गरेको बताइएको छ । गुजराति मुर्रा, अर्ना, जर्सी र होलस्टेन जातका गाई र भैँसी उक्त फार्ममा देख्न पाइन्छ ।
छ वर्षदेखि पशुपालन गरेका भट्टराइले कोरियाको पशुपालन गर्ने प्रविधि र पद्दति तथा नेपालमा पशुपालन गर्ने प्रक्रिया निकै भिन्न रहेको बताउछन् । कोरियाका सरकारले खोर बनाउन मात्रै ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने गरिन्छ तर नेपालमा बनाइसकेपछि मात्रै अनुदान दिने चलन छ ।
एउटा गाईबाट मात्रै दूध उत्पादन शुरु गरेका उनको फार्ममा अहिले रु १५ लाखको लगानी छ र त्यसलाई अझ विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । सैनामैनालाई दूूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि तथा पशुपालनतर्फ लगानी बढाउने र कृषि तथा पशु बीमालाई प्रोत्साहित गरी सहकारीमार्फत व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्ने समूहलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने सैनामैना नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
रुपन्देहीमा करीब ४०० गाई फार्म र २०५ भैसी फार्म दर्ता छन् । जसमा कूल रु ३० करोड भन्दा बढी लगानी रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठक यसरी सकियो !
३० आश्विन २०७५, मंगलवार १५:१३